Basa muMiddle East - Inotsvaga - Basa ➢ Kubata
Basa muMiddle East nemashoko akazara
Basa muMiddle East nemashoko anotsanangurwa ekutsvaga. Ichi ndicho chikonzero vatori vedu vakanyorera iwe. Kuwana basa kune dzimwe nyika kunyanya kubva kune dzimwe nyika kusvika kuMiddle East hakusi nyore. Kutsvaka basa muUAE. Kutora nguva nekuedza. Kune rumwe rutivi, kana ukazviita nenzira yakarurama ichakushandira iwe.
Vanotamira kune dzimwe nyika vanoenda kune dzimwe nyika kuMiddle East. Nezvozvi mupfungwa, kambani yedu yekutsvaga iri kunyora iyi. Chinangwa chedu ndechekuratidza iwe nzira. Kunyanya kuti ungawana sei basa kuMiddle East.
Kambani yeguta reI Dubai inobatsira vamwe kuti vawane basa. Ndizvo izvi mupfungwa pfungwa yekambani yedu inopa tsanangudzo. iwe unoshandisa masangano edu iwe zvechokwadi unowana basa.
Qatar kuMiddle East imwe yezvakanakisisa zvekushandisa kune vashandi vemunyika yose. Iwe sewe expat mutsva unofanira kutarisira kutsvaga kwebasa. Kune rumwe rutivi, Kuwait neBahareni ndiyo inonyanya kutanga kutanga basa. Uyewo neSaudi Arabia neEgypt. Muzvose zvavo zvakakosha kuva nekutarisira basa kuMiddle East.
Ichi ndicho chikonzero chedu boka rezvenzvira rinonyora bhodhi iri. Dubai City Company inotarisira makambani akanaka chaizvo. Zvose izvi zvinowanikwa muurongwa hwekubhadhara mazano. Saka, nezvozvi mupfungwa, iwe unofanirwa kuziva kuti ungatumira chii chako zvakare. Nokuti kuwana Basa rakanaka kuMiddle East. Unofanirwa kudzidziswa zvizere.
Zvakadini neDhaibha City?
Tiri kunyora pamusoro peDhamasiko inoshamisa guta iri mutungamiri wekutsvaga nzvimbo iyi yakanaka. Guta reDhailand rine zvishoma nzira yekutsvaga yekutsvaga. Iyi nharaunda yacho yose inosanganisira guta guru reUnited Emirates. Dubai nevanenge 2.1 mamiriyoni evanhu. Guta iri rakanyanya chaizvo.
Dubai guta ndiro nzira shoma yehupenyu hutsva. Iyi nharaunda yacho yose inosanganisira guta guru reUnited Emirates. Dubai nevanenge 2.1 vanhu vane mamiriyoni, iri pane emirate iri kuchamhembe kwegungwa. Dubai iri kutora World Expo 2020. Chikwata chakaenderana nekutungamira kurarama nekushanda muDaily City. Pane rimwe divi, guta guru reUAE ndiyo nzvimbo yakanakisisa pasi pano. Usingarevi zvimwe nzvimbo dzinoshamisa muMiddle East.
Iyi nzvimbo inoshamisa ine zvakawanda zvezvipo. Sezve nyaya, kunyanya kuzivikanwa kwavo kweAirports Airports. Somugumisiro, guta iri rakasikwa. Chimbo chikuru chekutakura vatakuri nevatakura. Uyezve, ivai mumwe wezvizivikanwi zve Airports kuMiddle East. Imwe chokwadi chezvehupfumi chaiva mairi emari. Texaco Mafuta anotanga kuwanikwa magoroti epetroli mu1969. Kubvira panguva iyoyo inotanga kuyerera kuAmerica neEurope. Imari yeAustralia yemari inobatsira yakamhanya kusimbisa iyo misika yose yeUAE.
Paivawo nekutangira kweguta. Pakuvamba vakanga vari mumugwagwa uye vashoma mabheji. Hakuna dzimba uye hupenyu hwehupfumi. Denga rakadzika uye mamwe madhombe akare. Kazhinji, guta iri rakatanga parenje rakachena. Ukuwo, rumwe rutivi rweguta rinochengeterwa rakakwana. Uyezve, nokuti michina yayo inowedzera. Kuti uise imwe nzira, The emirate's western-style yekutsvaga uye vagari vemo. Muenzaniso webhizimisi reArabic inotungamirira hupfumi hwayo. Somuenzaniso mahotera uye mararamiro emararamiro. Zvichimbidzika zvive zvakanyanya mari yeHurumende yeDhailand.
Is Dubai iri nzvimbo inoshamisa muUAE?
Iri Guta iye zvino rinouya kuzororo dzekushanyirwa. Hurumende yakaisawo mari yakakura mumakwikwi pamwe chete nebhizimisi redzimba. Kwete kureva iyo inonyanya kukosha mari yemari. Dubai City ichangobva kuitika kukwezva nyika. Vanhu vatsva vanoshanyira guta iri kubva munzvimbo dzakawanda pasi rose.
Izvo zvikwereti zvakanyanya zvakaitwa makore apfuura. Kuburikidza nemishonga yakawanda yezvivako zvekuvaka makuru nemitambo yemitambo. Zvakanaka, United Arab Emirates inozivikanwa. Guta guru rave rinofananidzirwa mararamiro ehupfumi uye vaArab vakapfuma. Mitambo yemitambo uye fancy dzimba dzepamusoro.
The United Arab Emirates uye Dubai. Kuvaka zvivakwa zvaro uye zvivako zvebhizimisi zvakakwirira. Uye kunyanya, nzira dzinova dzakanakisisa munyika. Kusvikira pakuguma, uye nekuratidza, nei zvakakodzera kushanyira nzvimbo iyi ?. Zvinokosha kuziva kuti pane chivako chikuru chepasi, Burj Khalifa.
Dubai iri kukugamuchira iwe nguva yose. Iva muenzi anofara weUAE. Nezvozvi mupfungwa tenda iwe pachako uye muUAE. Nhanho yakanaka. Uye uve nenguva yakanaka.
Algeria kuenda kuUnited Emirates
Algeria kuUnited Emirates ne Dubai City Company. Basa rekushandira rakasimba riri kubatsira vanhu kuwana basa mu Dubai. Inonyanya kambani yeAgeria
Iyi Nyika Inoshamisa, Algeria iri pedyo neUnited Emirates ne Dubai City Company
Algeria ndeimwe yenyika dzakaoma. Uyezve, inotsanangura kufamba kune dzimwe nyika. Nezvakanaka, vazhinji veAgeria vanofamba. Nokuti vaitsvaga basa reAgeria vachitsvaka basa muUnited Emirates. Ichi ndicho chikonzero tiri kuvabatsira.
Kune rumwe rutivi, Algeria ine nyika yeNorth Africa. Kuva nevakawanda vashandi vanokwanisa. Asi panewo vanhu vakawanda. Kazhinji kutaura neGungwa reMediterranean. Uye kunyange nerenje reSahara. Vari kutamira kuUnited Arab Emirates. Makambani akawanda ari kubhadharawo munyika yavo. Zvadaro zvichifambisa vashandi munyika yose. Ku Dubai kana Abu Dhabi. Panewo zvakawanda zvemashoko pamusoro penyika ino. Yakabudiswa muThe New York Times. Nemhaka yekambani uye CEO. Inowanzowanzobatanidzwa mumakambani Emirates Forbes.
Iva nekutarisa pasi apa. Zvatinogona kukuitira. Dubai City Company iri kubatsira vatorwa. Nokuti isu tiri kutarisira kugamuchira vatsva vakawanda. Bata basa muDhaibhi kuAlgeria. Tinopa visa uye mabasa emabasa.
Banking uye mari yezvemari
Bhizinesi uye mari yezvemari inoshandiswa zvakakwana nebasa uye kutungamira
Mari yebhangi inopiwa nekambani yeguta re Dubai inogadzira hurongwa hutsva hwebhangi. Ichi chikamu ndechezvinhu zvose zvemari uye mabhengi akazara mutungamiri
Banking chimwe chikamu. Izvozvi zviri mupfungwa, timu yedu inonyora mutsva. Dubai kambani yekambani inovaka gadziriro itsva yebhangi. Ichi chikamu ndechezvinhu zvose zvemari nemabhengi. Vanhu vanofarira zvikuru muzvikwereti. Nezvo mupfungwa, timu yedu iri kubatsira uye inotungamirira vashandi. Zvakakosha kuteerera kune maziso. Mari yezvemari yakaoma uye kune rumwe ruvoko, inokurudzirwa. Kunyanya kana tikataura pamusoro pemakambani makuru. Zvose zvinogona kuitika uye kukwira lather yekubudirira. Ichi chikamu chinokupa mutoro. Uye mufaro mukuru. Zviitire iwe munhu wokusika.
Sezvakangoitika, kubika uye kubhadhara mari, zvakakurumbira. Nzira dzakawanda dzinoita kuti uwane mari. Kune zvakawanda zvemari yemari makambani aripo mune zvose zvoupfumi. Misika yemabhizimisi uye mari yehurumende iri kufamba nokukurumidza kupfuura vamwe. Tora izvi zvakawanda. Uye edza kuziva kuti ndewe iwe.
Muzvokwadi, hapano nzvimbo dzekugara kwemari yemari. Chinhu icho chinogona kuwanikwa, munhu wose. Vanhu vari kumativi ose enyika vanowanzotanidza mumusika wemunharaunda. Kune rumwe rutivi, mabhangi achienda kune imwe nyika nebhizimisi. Nzvimbo dzenyika uye dzenyika uye dzenyika dzemari. Kukura kumativi ose enyika.
Kune rumwe rutivi, kuwana ruzivo rwemashoko kunofadza nekambani yedu. Iko kune maitiro maviri ehurumende. Yokutanga ndeyekutengeserana mabhizinesi. Uye yechipiri ndeyekushandiswa kwemari kubhengi. Imwe pfungwa, inshuwarisi uye kune dzimwe nyika. Ichi ndicho chikonzero tirikutora iwe pedyo nehurukuro iyi. Pakuguma, ita kuti uite. Kunyanya neBhangeing sector. Nhanho yakanaka neyiyi. Ichi chikamu ndicho chakanaka. Iva nechokwadi chekubatana nayo.
Basa rebasa kune vanotsvaka basa
Basa rekushandisa kune avo vanotsvaka basa mazano ekutsvaga kuwana basa
Mabasa uye Basa rinopa mazano kune vanotsvaka basa munyika. Zuva rimwe nerimwe kutsvaka basa. Ichi ndicho chikonzero kambani yedu kubatsira vanhu kuwana mazano akakodzera.
Basa rinopa zano, kunyanya kune vatsvaki vatsva. Vanotsvaka Jobho munyika. Zuva rimwe nerimwe kutsvaka basa. Ichi ndicho chikonzero kambani yedu kubatsira vanhu kuwana mazano akakodzera. Verenga mutungamiri wedu wakakwana kune vanotsvaka basa. Pasi payo mutungamiri timu yedu nguva dzose inova nechokwadi. Kupa ruzivo rwakakwana. Vashandi pachikonzero ichi vanotarisa vatariri vane unyanzvi hwakajeka. Nguva dzose iva nechokwadi chokuti unoziva nzira dzakarurama. Zvechokwadi, kubatsira vanotsvaka basa vasina kuiswa. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tarisai kuti kambani yedu inogona kukubatsira sei. Nechinangwa ichi, timu yedu yakasarudza iyi.
Kuwana basa rinofanira kuitwa munyika dzose. Zvinoda kukudziridza kutsvaga kunaka. Ita mukurumbira wekufunga kwekukurumidzira. Rimwe zano, kuisa nenzira imwe, edza kuita zvakasimba. Nguva dzose edza kuisa pakutanga. Vatsvaki veJobho chaizvoizvo vanoedza nguva dzose kusvika kune vashandi. Kune rumwe rutivi, kambani yedu inokupa mhinduro yakarurama yekuwana basa. Chidzidzo chakakosha kune vanotsvaka basa. Kazhinji kutaura, kuziva nzvimbo dzekutumira zvakare.
Vose vadzidzisi vakasiyana. Muchiitiko ichi, chengetedza pfungwa dzako kune pfungwa itsva. Izvo zvinokuita iwe vanhu vanobudirira. Kutsvaka basa hakusi nyore. Tora basa rako rinobudirira. Nekambani yedu, iwe unogona kuzviita. Nhungamiro dzedu dzinopa mutemo wegoridhe.
Makambani anotengesera pasi rose
Makambani eDhailand anotsvaga pasi rese neGulf Jobs.
Makambani anotengesera pasi pose uye kuGulf Region. Isu tinopa zvikamu zvakanakisisa uye zvakajeka zvemashoko nezvekambani nemasangano
Makambani pasi rose. Nezvozvi mupfungwa, kambani yedu inoita urongwa hwekambani dzinozivikanwa. Zvizhinji zvemafisi zvakapiwa muGulf Area. Asi kune rumwe rutivi, unogona kuwana mamwe masangano akawanda.
Our blog blog specialist in Dubai. Kunyora ruzivo, Kunyanya kumakambani, makambani makuru, uye mune dzimwe nguva maduku mashoma. Simba redu rinopa mamwe mashoko pamusoro pekuita makambani. Kutarisira uye kushanda kwekambani imwe neimwe. Uyewo nemhando dzezvikwata zvebhizimisi. Zvikamu zvedu zvemashoko zvakarurama. Kune imwe nyika uye makambani.
Chinangwa chedu chikuru ndechekupa ruzivo rwakanakisisa. Nezvo izvi mupfungwa kuwedzera kuongorora uye firms ruzivo. Uyewo nehuwandu hwewebsite uye screenshot.
Saka, kana uri kutsvaga mashoko akazara. Kunyanya nezvemafirmisi. Ndapota ona kutarisa pasi. Zvechokwadi uchishandisa mashoko edu. Nhungamiro yakanaka inogona kugadziriswa. Kambani yedu iri kubatsira firms. Uye kune rumwe rutivi, kubatsira vanhu vazhinji. Kuchengeta kujekesa uye kuomesa. Nguva dzose iva nechokwadi chokuti unofanira kutarisa zvitsva zvitsva. Nokuti tinonyora zvakawanda zvitsva. Chimwe chevhiki imwe chete.
Gulf mabasa anosvinudzwa kune vanotsvaka basa. Uye vazhinji vevashandi vanozviziva. Saka, nguva dzose ita nechokwadi chekushandisa chete zvakanakisisa zvakasimba muGulf Region. Chinangwa chedu ndechekupa nhepfenyuro yakanyatsonzwisisa. Kunyanya kukura makambani pasi rese.
Dubai City Company kubatsira expats
Dubai City Company kubatsira kubvumira kuwana basa mu Dubai
I Dubai City Company imwe yezvakanakisisa pakati pevatora muUAE. Shandisa mazano ekubhadhara. Tiri kubatsira zvitsvaga kuwana mabasa mu Dubai
Dare rezvenzvi nyanzvi ririkupa iwe ruzivo rwekutsvaga basa. Zvakanakisisa zvekushandisa kune vashandi vokune dzimwe nyika. Senyaya yekuti, Dubai City Company yakabatsira vatorwa venyika dzakawanda. Lets inotarisana nekugona kusvika kwekambani zviuru makumi maviri kuMiddle East.
Nhengo yedu yekushandira inyanzvi inogadzirisa kontrakiti nevashandi muUnited Emirates. Mienzaniso yakanaka yevashandi vedu vebasa. Ive kuve nekubhadhara nyika yose. Kubva kumatare akadai. Qatar, Saudi Arabia pamwechete neKwaititi neEgypt. Nezvinhu izvi zvose, vashandi vokune dzimwe nyika vanogona kukodzwa.
Vanodzokera kunyika vachakwanisa kuwana basa. Tinofanira kuyeukwa kuti hatisi kungotungamira vatsva vese vanoita basa. Dubai City Company iri kuisa vatorwa vokune dzimwe nyika kune dzimwe nyika. Vashandi veIndia, South Africa uye vatsigiri vePakistan. Kune rimwe divi, isu tiri kubatsira nekuwana kuti ndiani ari kukwereta pakati kumabvazuva. Somugumisiro weboka redu rinoudza musanangudzo muUnited Emirate. Kuve nechokwadi chokuti vatungamiri uye vatsva vakapedza kudzidza basa rakanaka.
Inotungamira kuwana basa mu Dubai
Basa rinotsvaga kuwana ruzivo rwekukosha. Muchidimbu pane kutarisa pasi apa uye ona bhokisi reku blog. Dubai City Company inoita kuti ive nyore. Kubva kumativi ose enyika.
Philippines workseekers zvakare kushandisa masangano edu kubudirira. Izvozvi zviri mupfungwa vanenge vaine vatongi vose. Zvechokwadi zvichaita rubatsiro. Vashandi pamwe nekupa vatungamiri. Kuwana kukosha kuburikidza nekushandisa mazano ekambani yedu. Kune rumwe rutivi, takabatana nehurumende inogamuchira.
Dubai kambani yekambani inokosha. Kunyanya kune vanotsvaka basa kune dzimwe nyika.
Dubai mabasa webhusaiti kuti udzoke zvakare uye uwane basa
Career webhusaiti uye mikana yebasa yekutsvaga mutungamiri. Dubai City Company inoronga tsanangudzo yakajeka yekutumirazve purogiramu uye kuwana basa
Dubai basa webhusaiti rekuwana basa rakakura. Kana iwe uri kutarisa kuti uite kuti uite basa rako. Shandisa Dubai City Compay. Nzvimbo yebhishopu yebasa ndiyo inonyanya kushandisa mvumo muA Dubai. Tiri kunyora nezvemashoko emabasa mu Dubai. Kubatsira kutsvaga kusarudza sarudzo yakarurama. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tarisa pasi apa. Kambani yedu inonyora zvakawanda zvezvinyorwa. Nezvinhu zvose zvinofungwa kuti zvikubatsire kuwana doro rekushanda. Nokuti nzvimbo dzebasa ndiyo yakanakisisa iyo.
Vashanyi vatsva vanoenda ku Dubai. Pamusoro pezvo, Dubai City Company iri kutamba basa rekuchinja zvinhu. Sangano redu munyaya idzi rinopa ruzivo rwakakosha zvikuru. Chimwe chazvo mapeji ekugadzirira. Kune rumwe rutivi, basa revavhimi vebasa rinogona kunyanya kuwanika paIndaneti.
Basa rekuArabic webusaiti haisi yevashandi chete. Nezvo izvi mupfungwa, timu yedu yakagadzira ruzivo pamusoro pemasuo emabasa. Mune zvimwe zviitiko, tinozvinyora uye zvidimbu zvezivo. Kunyanya ndiani ari kuunganidza muUnited Emirates. Ndapota ona kuti ungawana sei basa kuMiddle East. Kunyanya ku Dubai. Nemhaka yeguta guru muUAE. Iva kupfuura kupfuura mukurumbira wevanotsvaka basa.
Basa reDhailand rekuMabasa rekuwana basa
Vakawanda vevanotsvaka basa muEmirates. Zuva roga roga kutsvaga basa rakabhadhara rakapiwa. Anotsanangura kutsvaga basa kune dzimwe nyika muDhailand. Nokukurumidza kana kuti gare gare kuedza uye muhope dzinotangazve kubva kune dzimwe nyika. Kugadzirisa uye kutumira zvidzidzo kuEmirates. Sezvinoratidzwa pamusoro, inova chinhu chinokosha pakutsvaga kwebasa.
Job site inopa tariro kune vadzidzisi. Kuvabatsira kuti vachinje nzvimbo yekushandira kuti ive nani. Kuno uko unogona kusarudza kuti uwane mubhadharo wakakwirira. Kana kuti zvidikanwi zvakakodzera. Kana tichienzanisa nevatori, uko iwe usingaiti. Dubai jobs websites websites iri nani.
Hurumende yeUnited States. Kubatsira basa nzvimbo dzekushandira teknolojia. Ndizvo izvi mupfungwa mukusika mikana. Kune makambani emarudzi akawanda kukura muUAE. Bayt uye Careerjet ndeimwe yevakakurumbira mu Dubai.
Kusvikira panguva ino, taura zvakanaka pamusoro pekambani yedu. Edza kutibatsira uye kuwedzera CV yako. Kumakambani pasi apa. Ita purogiramu yako yakazowanikwa zvakazara nyika kune dzimwe nyika. Uye pakufamba kwenguva, ivai vanofara munyika yeEmirates.
Basa muDhaibha guta guru reUnited Emirates
Kubhadhara uye Basa muDhaibha kune vanotsvaka basa. Tsvaga basa mumukuru weUnited Emirates. Taura nekutengesa makambani nevashandi.
Basa mu Dubai kune vanotsvaka basa. Kambani yedu iri kubatsira basa vari kutsvaga munyika yose. Nokuda kwekuwana basa. Kambani yedu yakasika mabhuku akawanda. Kwete gusa Dubai City Company iri kubatsira. Kuti uwane basa muDhaibha. Kune dzimwe dzakawanda mamwe makambani ayo ari kuiridzira. Kambani yedu iri kutarisira zviongorudzo uye zvidimbu zvezvidimbu zvemashoko. Munyaya iyi, unogona kubata basa.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tapota tarisa ku blog yedu. Nokuti tinopa muenzaniso chaiwo wekuwana basa. Nezvo izvi mupfungwa, mumwe nomumwe wezano redu. Kuedza kuratidza nzira yekubudirira kwebasa.
Career seekers muUnited Emirates. Vakawanda vevanhu vachitsvaka basa muUAE. Uye nezvozvi mupfungwa, kusarudza guta rakanaka ndiro chinhu chinokosha. Kune rumwe rutivi, guta guru reUAE. Ive yakakurumbira zvikuru muUAE. Vashandi vachitsvaka vanotsvaka basa. Chinhu chokutanga chokuyeuka ndechokuti ungawana sei.
Saka, sekutsvaga basa. Tora mukana wacho nekambani yedu. Uye kune chikamu chikuru, tarisa pane zvatinogona kukuitira. Kunyanya kumabasa ekutsvaga muUAE. Pasi apa mune zvinyorwa. Uye vachakuendesa kune rimwe basa mu Dubai. Nhanho yakanaka yevashandi vemabasa. Uye tariro yekukuona zvakare.
Executive Search Firms - Job Hunting Kutsigira neHIV Team yakanakisisa!
The Executive Search Firms muEurope, kuMiddle East uye Internationally. Isu basa rekuvhima tsigiti rekugadzira zvidzidzo neHIV Team!
Machinda ekutsvakurudza anotungamira ari kuunganidza vanhu vakawanda muDhaibha city. Izvozvi mupfungwa mupamberi yedu kubatsira vanhu kugadzirisa matambudziko avo. Sangano redu rakakwanisa kugadzira rubatsiro rwekutsvaga basa. Uye tiri kupa mutungamiri unofadza zvikuru weVashandi pasi rose. Saka kana uri kutsvaga mabasa akanaka emikana. Iwe unofanirwa kutarisa mapiyona emakambani edu kune Job Seekers.
Mikana yepamusoro yemabasa inonyanya kuve nevanonyanya kushandiswa basa. Kambani yedu yave yakarongedza mumakore anotevera kune mazana emakambani ehurumende yekudzidzira pasi rose. Apo patinogona kukupa basa rakakosha. Uye takakwanisa kuisa zvose panzvimbo imwe kuti ikubatsire kugamuchira ruzivo rwakakosha.
Saka iwe wakafanana nemunhu ari kutsvaga vatungamiri vepamusoro ekugadzirira vashandi vanogona kuwana ruzivo rwakajeka. Kubva kune Manpower kusvika kuDHR International uye kubvumira basa rokutsvaga nekutsvaga mabasa ehurumende munyika yese. Kazhinji kutaura, sezvo isu tose tinoziva kuti mazamu akanaka ezororo anogara kuDhawk city uye zvirokwazvo muBud Dhabi.
Vatori veMiddle East
Saka, kambani yeguta reDhailand yakakwanisa kuenda nenzira iyi uye ichikupa iwe zvakanakisisa mutungamiri webasa rese yekutsvaga basa. Iwe unofanirwa kuita sei chaizvoizvo iine mutoro wakakura unorema pane urongwa hwevashandi vanogadziriswa vashandi. Nokuti dhipatimendi revanhu redu rinogara richipa mazano kuvanhu pane bhurogi redu. Somuenzaniso, tiri kutumira mashoko anofadza mumitauro yakasiyana. Saka vanhu vanobva kumativi ose eAsia Middle East neEurope vanogona kuwana ruzivo rwakanaka nezvemabasa e Dubai.
Kune rumwe rutivi, isu tiri kuedzawo kupa mazano uye kupa dzimwe mazano ekuwana kuwana basa kuMiddle East. Nokuti sezvo isu tiri kambani inotarisira nzvimbo iyi uye zita redu rinonyatsozivikanwa kumusoro uko. Saka iwe uchawana ruzivo rwakanaka uye rwakakodzera pamusoro pokuti ungawana sei basa muQatar kurindira uye kunyange Saudi Arabia.
Isu vatungamiri vakuru uye nguva dzose takamirira basa idzva Vatsva vanozobatana nekambani yedu uye vanozonyora CV. Nenzira iyi anotipa ruzivo rubatsiro. Nokuti mushure memakore akawanda ekubatana tinoziva kukunyora iwe zviri nani kuMiddle East.
Expat How To Become One of Them?
Tsvaga, nokuda kwechikamu chikuru, vanhu vanozviziva zvakanaka. Inongova munhu ari kutsvaga basa kune dzimwe nyika. Kana kuti ikozvino kushanda kune imwe nzvimbo kunze kwenyika yekwavo. Pane zvikonzero zvakawanda. Vamwe vanhu vachitsvaka basa kune dzimwe nyika kuti vawane mari yakawanda. Kune rimwe divi, vamwe vatariri vachitsvaka basa kuti vawedzere mitemo yavo. Especially living conditions. Ichi ndicho chikonzero vanhu vanobva kunze kwenyika.
Kune vamwe vanhu vanoshanda kune imwe nyika vane zvinoreva zvakadzama. Kurumidza kuedza kuva mutorwa zvinokonzerwa nekushanda zvikonzero. Muzviitiko zvakawanda. Vamwe vevashandi vanowira muhutano nenzvimbo itsva. Unogona kuva munhu mutsva. Kana kutoshandura nzvimbo. Izvo zvose zvinouya kune zvinoreva Expat.
Kune rumwe rutivi, vazhinji vevanhu. Achiri kutsvaga mazano ezvesayenzi. Nezvo izvi mupfungwa, Dubai City Company inonyora bhokisi re blog. Isu takasiyana nedzimwe mawebsite. Nokuti tinopa zvikamu zvakakwana zvemashoko. Pane kungoita nzira dzakakwana. Bato redu rinopa zano nekuzivisa pamusoro pehupenyu hwekuenda kunyika. Bato redu rinonyora zvizere zvinyorwa. Uye isu tinoedza kuchengeta zvinhu zvose zvinofungwa. Uye izvozvo zvave zvakajaira kugara kunze kwemahotera.
Iva nyika uye uende kune dzimwe nyika
Zvakakosha kucherechedza, kuti vazhinji vevanhu vanogona kuva mutsvaga webasa rose. Vanhu vanoshanyira dzimwe nyika. Zvisinei, kwete pamusana pezvisarudzo. kuti nyika ichava hupenyu hwavo. Chero chikonzero nei uchifanira kutamira kune dzimwe nyika.
Tine mutungamiri wedu, unogona kuva expat. Dare redu rakagadzira iri bhuku rekutsvaga vashandi. Nyaya yehuwandu iine zvinhu zvose zvaunoda kuziva kana uchifamba kune dzimwe nyika. Uine izvi mupfungwa, usanwisa nguva yako uye uone pasi apa. Nokuda kwekambani yeguta reA Dubai inoda kukubatsira iwe kuva expat.
Nzira Yokuva Sei Yacho Kubva Munyika Yangu?
Dzokorora, kune zvikonzero zvakawanda. Vamwe vanhu vachitsvaka basa kune dzimwe nyika kuti vawane mari yakawanda. Vamwe vatariri vachitsvaka basa kuti vawedzere mitemo yavo
VaPhilippines vashandi muDhailand
Iye zvino vashandi vePhilippines vanogona kuwana basa mu Dubai - Tsvaga basa rakanakisisa muUnited Emirates.
VaPhilippines vashandi muDhailand. Tsvaga iwe tsanangudzo yakajeka uye uwane basa muUnited Emirates. Kubva kuFhilippines kuenda kuDhaibha kana kuAdha Dhabi
Vashandi vokuPhilippines muDhailand, vanonyanya kukoshesa expats. Makambani akawanda anovashandira. Nemhaka yezvakawanda zvekutsvaga zvakanaka zvakanaka kushanda pamwe. Saka, kune rumwe rutivi, ivai umwe wavo. Edza kubata basa nekambani yedu muEmirates. Titi yedu iri kubatsira kuiswa. Kunyanya muMiddle East. Kune rimwe divi, timu yedu iri kubatsira zvakare neGulf Jobs.
Vatsvaki vechiJobho vanobva kuPhilippines vachiuya kuEmirates. Nezvo izvi mupfungwa, timu yedu inokutungamirira. Kazhinji vanoshanda kuFhilippines vashandi. Ndiwo rudzi rwechitatu rwekushanda muUAE ?. Kungoita vashandi vokuAsia. Dubai City Company iri kubatsira expats. Uye mutungamiri uyu unoitwa kunyanya kuvanhu vanobva kuPhilippine. Uine izvi mupfungwa, tarisa maitiro atingaita. Basa idzva rinokutsvaka iwe.
Sezvo an expat akaedza kugadzira basa. Kumira zvakare ku Dubai City Company. Uye kuva mushandi anofara muUnited Emirates.
Google Dubai ruzivo
Tiri kupaGoogle Dubai Guide. Uye gwaro rakapedzerwa rekuwana basa mune IT.
Google Dubai igwaro rakapedzerwa pamusoro pokuti ungawana sei basa muIt. Vanhu Vari kutsvaga basa muEAA. Google inopa mabasa mazhinji. Tsvaga kuti ungatanga sei.
Google Dubai ruzivo rwevanhu. Zvose pamusoro peizvi mamiriyoni ehurumende sangano. Kana iwe uchida kuwana zvakawanda nezvekambani yeGoogle neIk sector. Iyo inobatanidza mberi kwekutsvaga mhinduro dzakanaka. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, kana uchida kushanda paGoogle. Nekufambisa kwedu, munguva yakareba, kutsanangura kunowana ruzivo rwakakwana. Kazhinji kutaura, kambani yedu inopa nhungamiro yakajeka yeCIT career.
Kambani yeGoogle iri sangano remamiriyoni mabhiriyoni. Kune rumwe rutivi, kuhaya zviuru zvevashandi. Ita mari yakawanda inenge inenge nyika dzose. Nezvozvi mupfungwa, zvakakosha kuti utarise sangano iri.
Kambani yedu nguva dzose inoratidzira zvakanaka pamusoro peGoogle Dubai mahofisi. Nokuti isu tinoda zvinonzi neGoogle. Dubai city company specialist managing blog post. Kakawanda mumwaka. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tarisa pasi apa. Uye ndapota tsvaka zvakawanda pamusoro peGoogle. Chikonzero nei vari ivo vakanakisisa. Vari kubhadhara sei? Uye nzira yekugadzirisa mumugwagwa kwavari.
Hurumende yakajeka mashoko
Kubva kune vagari vemo kusvika kune Internationals. Vose vari kushanda muHurumende vanobvumirwa. Tine izvi mupfungwa, takaisa chikwata chitsva. Hurumende inonyatsorondedzera. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tiri kubatsira vanhu kuwana mamwe mashoko.
Dubai yekambani yekamba inonyora pamusoro peyi nyaya. Nokuti zvakakosha kuti titarise nyaya dzedu. Hurumende inogamuchirwa inzira kana boka revanhu. Mawebsite anozivikanwa yevheji. Ndivo vane masimba makuru. Zvechokwadi, iyo yatinobvumirana nayo nekunyora pamusoro. Mutungamiri wenharaunda yakarongeka. Izvo zvose nezveboka revanhu. Makambani anowanzotengeserana nebhizimisi.
Muchiitiko chekuunganidza mamwe mashoko pamusoro pekambani yeGoV. Izvo zvine tsanangudzo, tsanangudzo yaro yakawanda yekusimbisa. Makambani akabatanidzwa anowanzomirira sangano. Uyezve, mukuru, uye basa. Nzvimbo itsva yematongerwo enyika anobatsira masangano. Saka ita nechokwadi, verenga vatungamiri vedu. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, edza kushandisa mutungamiri wedu. Sezviri nyaya, kambani yedu inokubatsira. Iva nekutarisa pasi apa. Tariro tinokupa kukosha kwako. Nezvozvi mupfungwa, tichakugadzirisa iwe.
Chimwe chemienzaniso yedu yedu inopa. Ndeipi iyo yekuita izvi zvakakodzera. Kutarisira vanhu kuti vawane ruzivo rwakanyatsorondedzerwa. Rombo rakanaka. Nezvozvi mupfungwa, ona pa blog yedu. Isu tinonyora, tsanangudzo yakawanda pamusoro peGov. Saka kusvika pakupedzisira, ona iwe nokukurumidza.
Hurumende yakajeka mashoko kubva ku Dubai City Company
Hurumende yakajeka mashoko kubva ku Dubai City Company. Iwe uri expat uye uchitsvaga Gov zvakakodzera. Iva nekutarisa pasi apa pane zvinyorwa zvedu
Kutungamira Kushanda muDhaibha
Kutungamira kuzoshanda muDhaibha kune vashandi vemarudzi ose. Tsimba redu rezvenyanzvi. Kunyora zvinyorwa zvekutsvaga. Saka, pasi pemamiriro ezvinhu aya, edza mazano uye mazano. Nokuti kutsvaga vashandi muEmirates ndizvo zvatinoita zvakanaka.
Bato redu riri kutungamirira vatungamiri vakapa zvikamu izvi muDhaibha neAud Dhabi. Vashandi pasi rose. Kutarisa mberi kutamira ku Dubai. Pamusoro pezvakanaka, kambani yedu inopa rubatsiro kune vanotsvaka basa.
Kutungamira Kushanda muDhaibha neine tsanangudzo dzakajeka dzevashandi vepasi rose Nokuda kwechikonzero ichi, iwe unofanirwa kuita mazano uye mazano. Mabasa matsva uye aripo anotsvaka basa nekambani yedu. Saka iwe unofanira kuedza masangano edu muUnited Emirates.
Kurarama nekushanda muDhaibha. Zvechokwadi, iwe uchienda kuUAE. Iwe unogona kuva umwe wevanonyanya kubhadhara vashandi. Sezve nyaya, basa idzva rinofadza rinogona kuitika mu Dubai chete.
Pane chimwe chinhu chakaitika muupenyu hwako. Basa muMiddle East rinofanirwa kuenda. Zvisinei, kufamba uye kugadzirisa muEmirates. Kutora nguva nekuedza. Nezvozvi mupfungwa, tirikunyora mubhuku iri kwamuri.
Kushanda muDhaibha sechirwere
Kufamba kune imwe nyika itsva. Kunyanya kunyika yeMuslim inogona kuita basa rinotyisa. Nemhaka yezvitsva zvitsva kubva kumativi ose enyika. Vose vari kuuya kuEmirates kubasa. Kunyanya kana iwe uri kutarisira kusava nezivo inoshanda.
Dubai kambani yekambani inoziva kuti zvinhu zvinoitwa sei kugara kwekugara muDhaibhoni zvinogona kuva chimwe chezviitiko zvinonakidza zvehupenyu hwako. Zvisinei, kufamba uye kugadzirisa munyika itsva kunogona kunetsa zvikuru kana iwe uine ruzivo rwakanaka rwe kuti zvinhu zvinoitwa sei kuMiddle East. Dubai city company tsanangudzo mazano akavhara mativi ose ekutsvaga muUAE. Nokuti hupenyu hwakaoma zvikuru muDhaibhoni inogona kuva imwe yezvinotambudza.
Zvisinei, kufamba uye kugadzirisa muguta rakadhura zvakadai seDhailand. Pakutanga inodhura hupfumi. Vamwe vevanotsvaka basa vanogadzirisa uye vanorwisana pakutanga. Vazhinji vekutsvaga vanoda chirongwa chekushanda ku Dubai. Nokuti nyika itsva inogona kutyisa ruzivo. Kunyanya kana vakabva kune dzimwe nyika kune dzimwe nyika. Saka kupedzisa kuti, tarisai pane zvatinotaura. Verengai nerudo. Uye uwane basa kubva kuUnited Arab Emirates.
Kutungamira Kushanda muDhaibha neine tsanangudzo dzakajeka dzevashandi vepasi rose
Kutungamira Kushanda muDhaibha neine tsanangudzo dzakajeka dzevashandi vepasi rose Tine ruzivo rwedu, uchawana kuti ungawana sei basa mu Dubai.
Gulf Jobs nekutsvaga basa
Gulf Jobs uye kushanda kune imwe nyika kune vanotsvaka basa munyika yose
Basa muGulf Region uye kushanda kune dzimwe nyika kune vanotsvaka mabasa munyika yose. Sezvakangoitika, basa riri munharaunda yacho nderimwe nharo yedu inotevera bhurogi redu
Gulf mabasa inonyanya kutsvaga yekutsvaga. Uye Dubai City Company iri kupa pachena izvi. Kune rumwe rutivi, vatsva vanotsvaka basa vari kutsvaga basa. Kuuya kubva kumakondinendi ose. Kubva kuIndia nePakistan pamwe neUnited States neTurkey. Vose vari kutsvaka basa muGulf.
Gulf Jobs uye kushanda kune imwe nyika kune vanotsvaka basa munyika yose. Sezvakangoitika, basa riri mumupata iri nenyaya yedu inotevera. Kune nzira dzakawanda dzekuwana basa muGulf Area. Kuti uise imwe nzira, unogona kuwana zviratidzo zvekurota mune dzimwe nzvimbo dzeGulf Countries.
The Nyika dzeArabhu dzePersian Gulf. Inonyanya kuzivikanwa pakutsvaga kwebasa. Nokuti kune matunhu manomwe eArabhu ayo ari muganhu wePersian Gulf.
Uine izvi mupfungwa, unogona kutsvakurudza nezvemabasa. Ndizvo zvakanakisisa Gulf countries. Somuenzaniso, basa muBahrain, rinofarira basa revanhu. Kwete basa rakawanda rinowanikwa muIraq kunze kwekugadzirwa kwezvinhu.
Kune rumwe rutivi, pamwe nemutungamiri wedu, iwe uchava nezvakawanda zvekutsvakurudza. Imwe yemuenzaniso ndeye Kuwait neOman mabhizimusi mabasa. Ikoko iwe une Qatar neSaudi Arabia uye Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi (UAE).
Nezvinhu zvose izvi zvinoshamisa, unogona kutsvakurudza. Uye zvechokwadi vekambani yedu ichakutungamirira iwe. Dare revatariri rekunyora ruzivo rwekutsvaga. Iva nekutarisa pasi apa uye uverenge bhuti rekushandisa. Dubai city company iri pano kuti ikubatsire iwe. Nhanho yakanaka yevashandi vemabasa.
Bhuku Rekuchengetedza Utano reVanaki, Vanachiremba, uye Chipatara
Isu tinopa ruzivo pamusoro peHIV Care Guide yeVanaki, vanachiremba, uye chipatara. Vashandi vari kutsvaga mashoko akawanda. Dubai City Company rinounza zvinyorwa.
Utano hwehutano, nhungamiro yakajeka yevashandi chaivo. Dubai yekambani yekambani inotarisira zvakanyanya zvinyorwa. Nezvozvi mupfungwa, tiri kubatsira vanhu. Kuwana mazano akanaka akajeka angakubatsira iwe. Tsvaga nzira itsva yebhizimisi. Kubatsira kuti uwane chiremba kana mukoti vadzidzisi.
Chimwe chikamu chinonakidza ne Dubai Dubai. Yakanyanyogadzirwa kuti iwane nursery. Uyewo navanachiremba mumwe akabatana nevashandi vechipatara. Yedu nyanzvi rudo rwehutano hwehutano. Nokuti unogona kuwana dzakawanda zvehutano hwevashandi. Kubva kune vanotsvaka basa uye kupa vashandi. Kusvikira pakuongororwa nezvezvipatara.
Zvipatara kumashure, vanofarira mabhizinesi. Somuenzaniso, imwe yezvakanakisisa kuMiddle East. Vashandi vari kuenda kuMiddle East. Uye kune rumwe rutivi ane ruzivo rwakakwana. Ichi ndicho chikonzero tiri kupa mutungamiri. Nokuda kwehutano, Vanachiremba vanoyamwisa uye zvipatara.
Ndapota tarisai pasi apa. Uye regai tikutungamirirei. Wana mamwe mashoko nezvehutano hwehutano. Uye ugova shanduro yedu yekuverenga. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tinokukoka. Chipatara pasi mune mamwe mazwi, akakodzera kushanyira.
Hotel Guide uye mashoko
Nhungamiro yehotera uye kuongororwa kwemashoko pamusoro pekambani
Tiri kupawo ruzivo pamusoro pehotera rekufambisa uye ruzivo, tsanangudzo dzakagadziriswa dzezvenyanzvi nezvekambani Muchipatara mhizha inoshandiswa yekushanda uye yose pamusoro pehotera
Nhungamiro yehotera uye ruzivo rwekugamuchira vaeni. Tiri kubatsira vanhu kuti vawane zvakawanda pamusoro pebhizimisi rekudyara. Nzira yekuenderera mberi nemashoko aya edzimhosva. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, Dubai City Company kunyora zvakadzama blog posts.
Vanhu vari kutsvaga yeInternet kuti vawane ruzivo. Chimwe chazvo zvipatara zvipatara. Dubai city company inopa. Chimwe chinhu chinokosha nezvemashoko. Kambani yedu nguva dzose inobatsira vanhu. Kunyanya, nemashoko matsva anotsvaga uye kuongororwa.
Kazhinji, tiri kuedza kuvhara pasi rose. Kubva kuEurope kusvika kuUAE. Canada neAustralia kuMiddle East. Nezvozvi mupfungwa, tiri kutarisa kukubatsira iwe. Kune chikamu chikuru, tiri kunyora nezvekutsvaga basa. Nguva nenguva, tarisa zvinyorwa zvedu. Tinogara tichipa nyaya dzinokosha. Nokuti vatungamiri vedu vanonyanya kugadzirirwa vanhu. Kungofanana newe newe. Uye hatisi kumborega. Chero bedzi patinenge tine musoro. Tinovafukidza. Best blogs ane vateereri vakarurama. Ichi ndicho chikonzero tinoshingairira zvakanaka.
India Information for job seekers
India Dzidziso yevashandi- basa rinobva kuAsia. Tsvaga nzira yekuenda ku Dubai. Dubai yekambani yekanyora inyorera vashandi veIndiaIndia Mashoko evanhu vanoita basa- kubva kuAsia. Tsvaga nzira yekuenda ku Dubai.
Dubai yekambani yekanyora inyorera vashandi veIndiaIndia Mashoko evanhu vanoita basa- kubva kuAsia. Tsvaga nzira yekuenda ku Dubai. Dubai city company inonyora vashandi veIndia
Mashoko pamusoro peIndia. Mikana yeIndia kuDhailand. Inotsvaga kubva kuIndia kusvika kuA Dubai. Zvose izvi zviri muchikwata chedu. Vakawanda vevanhu vari pasi pose vachitsvaka basa. Kunyanya Indian expatriates. Vari kutsvaga basa muUnited Emirates.
Sangano redu rinotarisira uye rinotungamirira. Ndizvo izvi mupfungwa, kuva neruzivo rwakanaka muMiddle East. Zvechokwadi kukuita iwe unogona kushanda. Kune rumwe rutivi, kana uri kutarisa kuti uende. Dubai yekambani yekambani inomutambo wekushandira iwe. Sezviri nyaya, kutsvaka basa kunotora nguva. Ichi ndicho chikonzero kambani yedu kubatsira Asian expats kuti iende kuUnited Emirates.
Vashandi vokuIndia ndivo chimwe chezvakanakisisa. Uye zvakare, imwe yevakakurumbira muUAE. Uyewo vamwe vavo vari kushanda muKaititi, Saudi Arabia, uye Qatar. Kazhinji kutaura muGulf States yose. Saka iwe unofanira kuverenga mazano edu eAsia expats.
Dubai City company ichakuratidza nzira. Kubvira kuVisa uye kutamira ku Dubai. Kusvikira pakuwana basa muDhailand kubva kuIndia. Uye Ita basa mu Dubai.
Kubvunzurudzwa Kwebasa kune imwe nyika
Kubvunzurudzwa kwebasa kune imwe nyika kuwana mamwe mashoko
Inobvunzurudza yekushanda kune dzimwe nyika. Tsvaga zvakawanda pamusoro pekugadzirisa nzira yekutanga yevanyanzvi nevanoshandisa kumangwana. Mazano uye mazano ekutsvaga.
Nhaurirano ndiyo inonyanya kukosha. Pasina iyo, haugoni kuita basa. kunze kwekuti iwe uine hukama hwakasimba. Kambani yedu inonyora nhungamiro yakazara yevanhu. Nezvozvi mupfungwa, takagadzira chikamu chitsva. Inobvunzurudza yekushanda kune dzimwe nyika. Pamusoro pezvakanaka, nyaya iyi haisi iyo yakaoma kupfuura. Zvose zvaunoda kuita muchokwadi ndechokuziva nzira yekugadzirisa nayo. Inobvunzurudzwa iyi inotsanangurwa.
Vakawanda vevanhu. Kutarisa mberi pakupfuura Hurukuro yekubvunzurudza yekushanda kune imwe nyika.in mutungamiri wedu, unogona kuwana nzira yekutaura paunenge uchitsvaga nzira. Kufuridzira uye unyanzvi kutaura ndeyekuita mari.
Tsvaga zvakawanda pamusoro pekugadzirisa nzira yekutanga yevanyanzvi nevanoshandisa kumangwana. Mazano uye mazano ekutsvaga. Kunyanya kana iwe uri kuwedzera iwe unoda kutiverengera tsanangudzo yakazara. Kune rumwe rutivi, kana iwe uine zvidzidzo. Mutungamiri wedu achakubatsira iwe kuti uzvizive. Chinhu chikuru chinobata ruzivo chiso chinotarisana. Zvinosuruvarisa, haasi munhu wese anonzwa zvakanaka nazvo.
Ichi ndicho chikonzero temaiti yedu ichikubatsira kupfuurira kune iyo. Nokuti kana iwe uchigadzirisa zvakashata. Uyezve, hauzive kuti ungagadzirira sei. Verenga bhuku redu remashoko. Wana ruzivo rwakakosha. Uye ita kuti zviitike.
Mabasa mu Dubai 2019 uye 2020
Mabasa mu Dubai 2019 uye 2020 kune vagari venyika uye vagari vemo muUAE. Ichi chikamu chinowanzotaura. Nezvekuwana sei basa mu Dubai mu 2020. Chimwe chinhu chinokosha icho kambani yedu yakaisa muEmirates. Ndeyechokwadi ruzivo pamusoro pekushanda kwebasa mu 2020. Uye chii chakanakisisa chakanaka kune vanoenda kune dzimwe nyika ?.
Bato redu rekushandira rinotungamirira vashandi kuMiddle East. Uchapupu hunonyanya kukurudzira hwokuti unogona kuwana basa muUAE. Kazhinji kutaura, ndiko kuziva kupi kutumira CV yako. Dubai iri pachena nzvimbo yakanakisisa yekurarama nekushanda.
Kubva kutungamira kwebhizimisi, boka rekutengesa, uye unyanzvi. Mikana yese yemabasa inowanikwa yekutsvaga ku Dubai. Vatsva expat vashanyi vanogona kuwana basa mu Dubai 2020. Panguva imwe chete, towanawo nzira yekugadzirisa zvakare ku Dubai. Uyezve, muenzaniso unonyanya kushandiswa weshoko. Uye nzira yekubatana nevanoshandira vashandi. Zvose izvi zvinowanikwa pazvigwaro zvedu. Nhengo yedu yevashandi vezvemabasa kumirira kutsva patsva.
Mabasa Anotsvaga ku Dubai 2020
Edza kuva expat muUAE. Vakawanda vevanhu, munyaya iyo, vanoshanyira UAE. Pose pakushanyira visa. Asi mune dzimwe nguva, zvinodiwa zvinodiwa zviri kushanda visa. Saka iva nechokwadi chokuti uchaverenga zvakakwana murayiridzi wekuA Dubai. Tende redu rinotarisira kukuona iwe kakawanda. Ndapota tsvaga nzira yekuwana basa muEmirates mu2020. Nhanho yakanaka yevashandi vemabasa.
Dubai City Kubatsira vashandi. Vatengi vatsva uye variko vari kuwana mitsva mibairo vacancies nekambani yedu. Edza kuva mumwe wavo uye uchinje mararamiro ako. Zvapiwa pfungwa idzi, timu yedu iri kukukoka iwe kuti ushande ku Dubai 2019. Titi yedu iri kugara ichiisa mitsva yakatsva patsva pamitambo yedu yemagariro evanhu. Kune rumwe rutivi, tagara tichishanda pamwe nevamwe. Somuenzaniso Bayt.com uye CareerJet. Kubudirira kuisa vatori venyika kunze kwekushanda kune imwe nyika muDhailand.
Mabasa mu Dubai 2019 kune vagari venyika uye vagari vemo muUAE
Mabasa mu Dubai 2019, nezvekuwana basa kune dzimwe nyika muDhailand. Tsvaga basa muUnited Emirates. Tora iwe gwara rakakodzera rekutsvaga
Mabasa muIndia nevatariri vedu vanozvidzivirira. Kambani yedu iko zvino inoshandisa kuIndia. Kusvikira panguva ino, tiri kugamuchira zvikumbiro. Kunyanya kubva kumakambani eIndia. Nokuti ivo vari kutsvaga vatariri vakawanda. Uye nezvozvi mupfungwa, timu yedu iri kutarisira nzvimbo.
Sezve nyaya, tiri kubatsira vanhu kuti vave vashandi. Uye nezvo izvi mupfungwa, vashandi vekuIndia vanokurudzira kambani yedu. Somuenzaniso, tine vateveri vakuru pa Facebook uye Linkedin. Nokuti kambani yedu telly kubatsira vatariri. Kune rumwe rutivi, pane makambani akawanda. Kuti boka redu riri kushanda naro. Pamusoro pezvakanaka, tirikubhadhara dzimwe nzvimbo. Semuenzaniso, mutero weTI nekutengesa. Uyewo maInjiniya. Uye hurumende inobatanidza mikana yemabasa.
Titi yedu yevashandi vezvemabasa. Sezvowo vakadzidzisi vadzidzisi vepamusoro. Iye zvino achifambisa kumusika wekuAmerica. Uye kunyange nechechikwata chedu, ndicho chinhu chitsva zvachose. Asi, muzvokwadi, isu tiri kutarisira kune vanoedza basa reIndia. Hazvina mhosva kuti zviitiko zvatichava nekambani yedu. Boka redu rekusarudza richava mushandi weIndia.
Dubai City Company yakakurudzirwa. Titi yedu iri kushanda kubatsira vanhu veIndia. Uye isu tirikubatsirawo kuwana basa muMumbai. Rimwe remaguta akanaka kwazvo kushanda semuIndia mukuru. Panguva ino Mumbai inenge inopfuura 16 mamiriyoni evanhu. Uye izvozvo zviri kupa mukana mukuru. Kunyanya pakati pevakadzi vadzidzisi vadzidzisi. Mabasa mu Mumbai haasi nyore kuwana. Saka, tarisa mikana inogona kuwanikwa mu Career pamakambani e Mumbai. Kune rumwe rutivi, muKi Mumbai guta, kune mikana yakawanda yemasangano mashoma uye pamwe neyemafisi ekumusha kushanda. Iri guta muIndia zvakanaka kuti enda panzvimbo. Kunyanya kuvashandi vane ruzivo.
Kutsvaga basa muKalkata iyo inenge yakanyatsoita sangano. Kusvikira panguva ino, guta rino rine 13 mamiriyoni evanhu. Saka, chero bedzi vanhu vakavawana vachivimba zvikuru. Guta iro rinoratidzika kuva guru. Nemhaka yehuwandu hwevanhu. Uye pamwe nemakambani enyika. Zviri nyore nokuda kwevanhu uye zvekudyidzana kwenyika dzakawanda. Somushandi wekushanda. Iwe unofanirwa kuedza kutsvaga basa muK Kolkata.
Mhedziso yemabasa muIndia
Saka, kana uri kutsvaga mabasa muIndia. Iwe unofanirwa kutarisisa mazano edu. Tine izvi mupfungwa, tinopa zvikamu zvakawanda zvemashoko. Kunyanya kugadzirirwa vatsva uye vatariri vane ruzivo. Tiri kupa mutungamiri munyaya dzedu. Tarisa pasi apa nzira yekuwana basa muIndan zvakanakisisa maguta. Saka, iva mushandi anofara. Uyezve, edza kushandisa sangano redu. Uye netariro, iwe uchawana basa muIndia. Titi yedu inokuda iwe rombo rakanaka.
Mabasa muIndia - Tiri kupa mutungamiri kutarisa nzira yekuwana basa
Mabasa muIndia mazano ekuvandudza uye vatariri vane ruzivo. Tiri kupa mutungamiri munyaya dzedu. Tarisa maitiro ekuwana basa muIndan Cities.
LinkedIn ndiyo inonyanya kushanda nzvimbo. Munguva ichangopfuura yakatorwa neIndia kutarisira. Kune rumwe rutivi ruoko rwakanakisisa rwekubatana kwenyika yose. Inzvimbo inofadza chaizvo iyo inyanzvi inogona kudzoka zvakare. Uyezve nzvimbo yepamusoro yekuwana mukana wekushandisa. Kuti udimbure iwe unogona kubatana nemapoka emabasa kuti uungane nevamwe.
Kuwana alumni uye kutora pamusoro pemabasa ekushanda. The Linkedin kambani ine vane 300 vanoshandisa mamiriyoni. Kazhinji vane 100k vatsva vatendi. Kutendeseka, kambani iyi ndiyo yakanakisisa mukirasi. Uyezve, unogona kutaura nevanhu vanofarira vanogona kukupa mazano akawanda. Nzira dzakanakisisa dzaungasarudza iwe unogona kukurukura zuva rega rega pasina mitsara. Kuonana newe, vadzidzisi.
Kune rumwe rutivi, Verenga mutungamiri wedu. Edza kuwana zvakawanda. Uye pamwe. Edza kuwana basa muUnited Emirates. Uyezve, tarisa kune dzimwe vashandi vokune dzimwe nyika. Izvo zvose zvinotarisira kuwana basa. Kunyanya pa-social network.
The Linkedin profession network ye Expats muDhailand City
Linkedin professional network. Tsvaga kuti ungawana sei basa muEmirates. Dubai City Company inopa mazano kune Expats kune dzimwe nyika muDaily City
Kutarisira Mabasa muUnited States Emirates. Dubai City Company kubatsira vanhu. Nezvo mupfungwa mupfungwa dzinogona kuchinjwa. Vatungamiri vepakati peji. Zvechokwadi vanotarisa kutora basa. Kunyanya muUAE. Ndizvo izvi mupfungwa mupfungwa yedu. Kusvikira panguva ino. Unyanzvi mukuisa vatungamiri. Kazhinji, Dubai uye Abu Dhabi. Ichi ndicho chikonzero Dubai City Company inonyanya kuverengwa yakasimba. Mune, pane chimwe chinhu muGulf Area.
Basa rokutarisira rakanaka zvakakwana kuti zvibatsire. Sezvakangoitika, kambani yedu kubatsira vabatsiri. Kambani yedu inoita kuti vanhu vararame. Chinangwa chedu ndechekutikubatsire kusvika kune zvinangwa zvako zvemhizha. Uye isu tiri kuedza kupfuurira kusvikira iwe uchizviita. Itai kuti ive Basa renyu reKutevedzera muchokwadi. Tenda iwe pachako kuti iwe unogona kuva mutungamiri mukuru muUAE. Kubata basa mu Dubai. Ita kuti ive yakakwana kuva yakanakisisa. Tanga basa idzva nekambani yedu.
Mukana uripo muEmirates. Iko kune iwe chete kana ukaita hukuru. Ziva basa rakakura. Kutaura mumagumo. 'Usafe wakasiyana nazvo. Pakudzoka zvakare. Tanga basa muUnited Emirates. Nechinangwa chekuva akakosha. Ngatitendei mauri.
Management Careers muUnited Emirates neGulf
Management Careers muUnited Emirates uye Gulf. Vatungamiri vepakati peji. Zvechokwadi tarisa kutora basa muGulf
Pakistan ruzivo uye mutungamiri weUAE
Pakistan ndiyo nyika yeMuslim. Uye sangano redu rose ndeye nyika ino. Kubva kuPakistani vashandi muDhaibha. Pane zvakawanda zvevatungamiri. Uyewo vatariri vakuru vembongoro. Nemhaka yevanhu vari kufamba. Kunyanya kubva munyika ino. Anova mumwe wezvakanakisisa. Nezvo izvi mupfungwa, kambani yedu inopa ruzivo rwekukosha. Sezvakangoitika, boka redu riri kutungamirira. Nzira yekuwana basa ku Dubai sePakistani.
Titi yedu yevanyanzvi. Kutarisira mashoko akawanda kwazvo. Zvose pamusoro pePakistan. Nokudaro, kubatsira vamwe ndiro. Kunyanya ne Dubai City Company. Titi yedu iri kuisa vashandi. Shanda kune imwe nyika sePakistani ku Dubai. Ndizvo zvatinoita zvakanakisisa.
Kune rumwe rutivi, vashandi vanobva munzvimbo yeMuslim. Yakakodzera chaizvo muGulf region. Inongova tsika imwe chete. Saka zviri kuita kuti zvive nyore nyore. Kunyanya kune vatsva vakapedza kudzidza. Ndicho chikonzero nei vatongi vanobva munyika ino. Kushandisa kambani yedu muDhailand. Kuti iiswe muUnited Emirates. Kana kunyange muGulf Countries. Zvichida nokuti Pakistani ine dzidzo yakanaka. Kutaura Arabic zvakare. Ndapota tarisai pasi apa. Zvatinogona kukuitira. Verenga nyaya dzedu pamusoro pebasa uye basa. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, anoiswa muEmirates.
Pakistan ruzivo uye mutungamiri weUnited Emirates Emirates
Pakistan ruzivo uye mutungamiri weUnited Emirates Emirates. Pakistani ichawana zvakakosha zvikuru nemashoko edu. Dubai City Ikambani inonyora nezvekusunungura.
Qatar nyika yeruzivo rwevatorwa
Qatar kune vanotsvaka basa. Titi yedu iri kunyora nezvekuwana basa. Kubva kuQatar kusvika kuDhaibha uye Abu Dhabi. Nechinangwa chekubatsira vanotsvaka basa, timu yedu inonyora nyaya dzakawanda. Vatsva vaJobho kubva kuKatar mune mamwe mazwi. Zvechokwadi vanogona kuwana kukosha pavanenge vachiverenga zvatinotumira. Nemhaka yekambani yedu. Nokuda kwechikonzero ichi, tiri kuisa Qatari. Kunyanya muUnited Emirates.
Saka, sekutsvaga basa, iwe unofanirwa kutarisa. Zvingaitwa nekambani yedu kune iwe. Mukutsvaga kwekutsvaga basa muUAE. Kune rumwe rutivi, kana iwe usingadi kutevera mimwe mitemo. Zvichava zvakaoma kuwana basa rakanakisisa mu Dubai. Izvozvi mupfungwa mupfungwa dzedu dzekunyora magwaro. Kuwana basa rekutsvaga ndiro izvo zvatinoita zvakanakisisa. Vatariri vedu vashandi nguva dzose vanomirira kutora patsva.
Sezvakaitika, vatungamiri vedu veH HR. Nguva dzose kutsvaka nzira itsva dzokukubatsira. Saka, timu yedu inoisa nyaya. Zvitsva zvemashoko mabhuku nezvevashandi veKatari muDhaibha. Uye kuti ungawana sei basa muDhaibha kubva kune dzimwe nzvimbo kuMiddle East. Kutarisira kukuona iwe pawebsite yedu. Kazhinji kacho.
Qatar nyika yenharaunda yevatorwa vari muUAE
Qatar nyika yenharaunda yevatorwa vanofarira kudzokera kuUAE. Mitsamba yakagadzirwa sei yekuwana basa muUAE. Kubva Dubai City Company.
Recruiter mashoko uye kuongororwa
Recruiter mutungamiri uye zvidimbu zvemashoko. Inonyanya kugadzirwa kune vanotsvaka basa. Dubai City Company inobatsira kusvika pakugadza vatungamiri. Kune rumwe rutivi, unogona kuwana kambani yakanaka HR. Nechi ino chinyorwa. Panguva imwecheteyo, timu yedu inoita mhinduro. Kuisa ruzivo pamusoro pevatariri vekushandira. Uye pamusoro pevose varo vanovabatsira basa.
Kune rumwe rutivi, Dubai City, muzvokwadi, inzvimbo yakarongedzwa. Especially for recruitment managers. Nechinangwa ichi, kambani yedu yakawedzera. Kuchengetedza uye kubhadhara chikamu. Kutarisira izvozvo, kunobatsira vanotsvaka basa kuwana basa. Uye vatori vekutsvaga kutsvaga.
Nokuda kwekubatsira vamwe. Dubai City Company. Kudzokorora makambani akakurumbira aH HR. Kubva kuGulf Countries. Kusvika kumarudzi ose okubhadhara misika. Zvose izvi zvinogona kuwanikwa munyaya dzedu. Ndapota ona kutarisa pasi. Uye nyora kubasa redu. Nyanzvi yedu inokubatsira zvechokwadi. Kusvikira pakuguma, zvakanaka mavashandi. Kutarisira kukuona iwe muUAE.
Kuchengeta uye kugovera vatungamiri ruzivo nekuongororwa. Kuchengeta uye kuunganidza vatungamiri pamwe nevatongi veH HR. Ruzivo ruzivo nekuongororwa kwevanotsvaka basa muUnited Emirates
Tangazve mienzaniso uye mazano
Inotanga mienzaniso uye mazano ekuva nemabasa akanaka. Vazhinji vevatariri vekutsvaga vanotarisira kutsvaga zvakanyanya kunyorwa zvakare. Sezvakangoitika, munhu asati agadzirira basa. Pane zvinhu zvishomanana zvinofanira kuteverwa. Chikamu chakanaka chechiitiko pamwe nekupereta uye gwaro rekukanganisa. Mune zviitiko zvakawanda, kushanda kwebasa kunofanira kuitwa kusina gwapa. Kunyanya kuronga uye vakuru vemazinga emabasa.
Jobho maitiro ekuwana basa. Kune zvakawanda zvakawanda zvekushandisa paIndaneti. Uye CV ndiyo chete inogona kukubatsira kuwana basa kune dzimwe nyika. Ngatitarisei, vatori vasiri kutarisa zvose zvekushandisa tsamba. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, unoda kuziva kuti unyore seizve. Kazhinji, vanhu vanotumira varombo vakaita Resume. Imwe yemuenzaniso ndiyo dote dump. Iko pasina nhamba dzenhare uye nhare. Nezvozvi mupfungwa, kambani yedu yekunyora murayiridzo Nemhaka yezvinyorwa zvakawanda zvinodiwa uye mazano ekuwana basa munyika dzose.
Ndapota tarisai pasi apa. Bato redu rinotungamirira rinotsanangura uye vagari vemo. Titi yedu iri kubatsira mukunyora kushandiswa kwemabasa akawanda.
Mienzaniso yeRume uye mazano ekuwana basa munyika yose
Dzorerai mienzaniso nehurukuro yakajeka uye mazano ekuwana basa munyika yose. Tsvaga kuti unganyora sei CV nenzira iyo vashandi vanofarira nayo.
Mahofisi Ekutsvaga mazvikokota
Vashandi vekugadzirira vanonyanya kusikwa nokuda kwekuwana basa. Neichi mupfungwa mupfungwa yeDaily City Company inopa mazano kune mabasa anotsvaga. Sezvakangoitika, pane dzakawanda dzazvo. Somuenzaniso, tinovaparadzanisa zvakasiyana. Iko kune hurumende pamwe chete nehurumende yekuchengetedza yega. Kune rimwe divi makambani makuru ehurumende yekambani yekubhadharira.
Dubai City Company inopa mazano kune vagari venyika uye vagari vemo. Nekukandira makambani. Chimwe chepfungwa huru iyo yakasimba yedu yakavhara ndeyekuyera. Nezvozvi mupfungwa, isu tiri kutungamira vanotsvaka basa zuva rega rega. Kazhinji kutaura pamusoro pevashandi vanogona kuguta muguta
Dubai yekambani yekutsanangurira kuvhara mazano kune dzimwe nyika. Somuenzaniso, kuhaya makambani muSaudi Arabia, Qatar, pamwe neSouth Africa uye United Arab Emirates. Tarisira kutarisa zuva rega roga kuti rive rakanakisisa. Uye yakanakisisa iri muUnited Emirates. Hazvirevi nezvemakambani ekubhadhara masangano enyika. Mukupedzisa, boka reManpower, Rand Stad, Bayt.
Mahofisi Ekuchengetedza Maererano neZimbabwe neChamber City. Tsvaga hurumende dzekubhadhara dzakanakisisa uye vashanduri vemunyika yose muGCC yeGulf Jobs.
Nhungamiro yeSri Lanka yekutsvaga ku Dubai
Sri Lanka ruzivo rwakakwana rwebasa kune dzimwe nyika. Kuti tisareva chinhu chekutsvaga kakatova muDhaibha. Edza kushandisa sangano redu. Uye uzvione uri pakati pezvakanakisisa. MuA Dubai uye Abu Dhabi. Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi, Dubai City Company kubatsira vashandi. Panguva imwe chete, kubatsira neCV. Kuwana makambani akanaka. Chaizvoizvo kutarisira mikana iri nani. Zvikurukuru kune vaSri Lankan vanoenda kunyika.
Sri Lankan anotsvaga kuenda kuUAE. Nezvozvi mupfungwa, timu yedu iri kubatsira vatariri. Nhandare yedu yebasa inopa zvipo zvekufambisa. Ichi ndicho chikonzero nei vatorwa vanoshanyira webhusaiti yedu. Dubai kambani yeguta nguva dzose inotarisira kubatsira kubatsira. Titi yedu iri kubatsira. Munenge nzira dzose dzekuzadzisa zvinangwa zvemhizha. Nokuti kambani yedu inokosha zvikuru. Kuti iwe uchaiswa muUAE. Nokuda kweDhaibha neAud Dhabi. Ndizvo zvakanakisisa kune vanotsvaka basa.
Tsvaga zvimwe, zvatinogona kukuitira. Tingaita sei kuti tibatsire pasinei nekutsvaga basa. Iva nekutarisa pasi apa pazano redu. Kuva netariro ivo vachakubatsira iwe. Kunyanya kuwana basa muUAE.
Nhungamiro yeSri Lanka yekutsvaga. Detailed articles pamusoro pekuwana basa ku Dubai ne Abu Dhabi. Kunyanya kuInternational job seekers avo vari kutsvaga basa kune dzimwe nyika.
South Africa yekushanda muUAE
South Africa nyika uye inotsvaga kubva ikoko. Kambani yedu inonyora nyaya pamusoro peSouth Africa. Kunyanya nezvekutsvaga vashandi. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, timu yedu inozivisa vashandi. Kusvikira panguva ino, kambani yedu ichiri kubetsera basa vanotsvaka. Kuwana basa kune dzimwe nyika muUAE. Dubai City Company iri kubatsira vatorwa.
Basa rinotsvaga mberi. Zvinoda kutungamirirwa. Nguva dzose pavanenge vachitsvaka kuwana basa. Kunyanya muUnited Emirates. Vanhu veSouth Africa vanowana basa kune dzimwe nyika. Uye nezvozvi mupfungwa, sangano redu rinovaratidza nzira yekushanda. Dubai City Company in the final analysis. Kunyora nhungamiro yakazara. Kubata vaSouth Africans vanoenda kune dzimwe nyika. Kupara kwemhosva ku Dubai uye Abu Dhabi kwakanaka.
Vashandi veSouth Africa vanodzidza zvikuru. Nenzira imwecheteyo, kana tikavaenzanisa kune dzimwe nyika. Vashandi vanobva munzvimbo ino inoshamisa. Kuita nzira yavo yekubuda uye kufambira mberi. Uye kubva ipapo, inotsvaga kuenda kuM Dubai kana Abu Dhabi. Ikoko kuchafanirwa kugadzirisa nenzira chaiyo yehupenyu hweArabic. Uyezve, pane nhamba huru. Zvekutsvaga mukati
South Africa yekushanda muUnited Emirates neGulf. Kambani yedu inonyora nyaya pamusoro peSouth Africans kune dzimwe nyika. Kunyanya nezvekutsvaga vashandi.
Saudi Arabia ruzivo rwebasa
Saudi Arabia ruzivo rwebasa kune vashandi vemunharaunda uye vanotsanangura. Vanhu vari kutarisira kuwana basa. Nokuda kwechikonzero ichi, imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzekushanda. MuMiddle East. Nezvo, mupfungwa, chengetedza Saudi Arabia. nekucherechedza pane izvi. Nyaya yedu ndeyekushanda munyika ino. Uyezve, kubva kuSaudi Arabia. Kana kuti kunyange kutora sei basa iri munyika yeGCC. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tarisa zvatinogona kukuitira.
Nezvakanaka, munyika ino. Icho chikamu chikuru chekubhadhara makambani. Zvinoshamisa kuti vazhinji vavo vari kukwereta. Kazhinji kutaura ku Dubai neAud Dhabi. Kambani yedu iri kuongorora. Kubva kumakambani nekubhaja vatungamiri. Zvose izvi zvinoshamisa kuMiddle East nyika. Kune rumwe rutivi, nzvimbo ino inogona kuedza zvikwereti zvako. Hazvisi nyore kuva kubudirira munyika yeMuslim. Kushanda munyika dzeGCC.
Ita kuti iwe umire kunze kwevashandi. Yeuka migwagwa yakaoma zvikuru. Nguva dzose kutora kuenda kunzvimbo huru kune dzose. Kushanda kuMiddle East. Kuita vatsvaga mabasa vane ruzivo rwehutano.
Saudi Arabia ruzivo rwebasa. Kutsigira kwedu kuri kubatsira uye kutungamirira vanotsvaka basa. Kubva kune vashandisi vemunharaunda uye vanoenda kune dzimwe nyika. Middle East inotungamirira.
Shingairira kune imwe nyika ruzivo
Shanda kune dzimwe nyika ruzivo rwevanotsvaka basa. Teji yekambani yekambani yekambani yevanyanzvi Sezvinei nenyaya, tirikubatsira kuwana basa kune dzimwe nyika. Zvose mashoko e Dubai blog. Zvechokwadi inoparidzwa mukutenda kwakanaka. Nokuti chinangwa chedu ndechekubatsira vanotsvaka basa.
Uyezve vanotsvaka basa. Tinofanira kushandisa mutungamiri wedu webasa kune dzimwe nyika. Chete nekuda kwehuwandu hwehupenyu chinangwa chete. Vashandi vedu vatengi vanounganidza mashoko. Kupa basa rinopa uye mabasa kubva pawebsite. Vamwe vanhu vanoisawo mabasa ekupa basa panzvimbo yedu yebasa. iyo yatinenge tisingakwanisi kudzora. Somuenzaniso seboka reAssApp muGulf.
Kune rumwe rutivi, isu nguva dzose tinogadzirisa. Kune chero munhu anotsvaka basa angazoshandisa basa redu. Kambani yedu ndeyekuzara kwekuwana basa kune dzimwe nyika. Dubai yekambani yakatendeseka inonyatsozivikanwa muUAE. Kazhinji kutaura, boka redu rinopa hutano hwemashoko aya anowanikwa pane imwe nzvimbo yemabasa.
Chero chiito chaunotora uchitsvaga basa. Tsvaga uye edza pane ruzivo rwewebhu redu. Kudzokera ku Dubai guta kunonyanya iwe pachako. Saka tinokumbira vanotsvaka basa. Kuve nechikamu chezere zvakazara kwemashoko. Kunyanya asati anotarisa kuenda kuGulf Jobs.
Ndapota verenga tsvakurudzo yakazara. Ndiine Dubai city company. Usati waita / uchienda kune imwe nyanzvi yekubvunzurudza yebasa kuburikidza newebsite yevashandi.Nokuti sangano redu rekugadzirira rinotarisira basa roga roga. Isu tinofara nekuda kwevashanyi vatsva patinenge tichiparidza zvekare patsamba ino.
Kushanda kune imwe nyika
Asi ndapota ramba uchifunga, kuti kutsvaga basa kunotora nguva. Dubai City company kubatsira vabatsiri. Ichi ndicho chikonzero isu tine nzvimbo yakakwirira mune imwe nyika. Chinangwa chedu ndechekuisa vanhu vachitsvaga basa. Vose sezvatinokwanisa. Ita kuti vanhu vafare. Uye akavapa basa kwavari. Saka ramba uchienda uverenge mutungamiri wedu. Kubata basa basa kunze kwenyika. Uye pakupedzisira, iva nenguva yakanaka.
Shanda kune dzimwe nyika nhungamiro yakazara yevanotsvaka basa. Uye uone kuti ungaiswa sei semutorwa. Tiri kutarisira ruzivo rwebasa rebasa
Mudzidzisi wekudzidzisa basa
Kudzidzisa mutungamiri webasa pamusoro peUnited Emirates. Kambani yedu iri kubatsira vanoenda kune dzimwe nyika kuti vave vadzidzisi. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, timu yedu inonyora nyaya dzakawanda. Mamwe emakambani, kunyanya muUAE. Kutsvaga kuhaya vadzidzisi. Nokuda kwezvikoro zvevunivhesiti uye zvidzidzo zvevadzidzi. Pamusoro pavo vose. Vadzidzisi vanogona kufambira mberi mabasa avo.
Makambani anotarisa kuti atore vadzidzisi. Vatsvaki veJobho vanotarisira kutungamirira. Kazhinji kutaura, vaverengi vedu. Kutarisira vashandi vekutsvaka nzira yekudzidza. Uye nezvidimbu zvedu zvemashoko anonyatsoshanda. Kune rumwe rutivi, tiri kuongorora vadzidzisi nevashandi muUAE.
Bato redu rinopa zvakakwana murayiridzi wekudzidzisa. Dubai City Company vachishandisa tsanangudzo yakazara. Nokuda kwekusunungurwa nyore nyore. Uye kuwana chidziro chebasa. Titi yedu inobatsira vanotsvaka basa. Kusvikira pakuguma, ndapota tarisai pasi apa. Uye kuva mudzidzisi akabudirira. Kune rumwe rutivi, Dubai City Company. Ari kumirira iwe kuti ushanyire zvinyorwa zvedu. Tsvaga basa mu Dubai. Uye wova mushandi anofara. Uye nokuda kwechinhu chimwe chete, tiverenge mutungamiri wedu. Tiri pano kuzokubatsira.
Kudzidzisa mutungamiri webasa pamusoro peUnited Emirates. Kambani yedu iri kubatsira vanoenda kune dzimwe nyika kuti vave vadzidzisi kuMiddle East neGulf Area.
LinkedIn ndiyo inonyanya kushanda nzvimbo. Munguva ichangopfuura yakatorwa neIndia kutarisira. Kune rumwe rutivi ruoko rwakanakisisa rwekubatana kwenyika yose. Inzvimbo inofadza zvikuru iyo inyanzvi inogona kudzoka zvakare. Uyezve nzvimbo yepamusoro yekuwana mukana wekushandisa. Kuti udimbure iwe unogona kubatana nemapoka emabasa kuti uungane nevamwe.
Visa nzira uye ruzivo rwekutsvaga
Visa kuti uwane ruzivo rwakakwana rwekutsvaga. Ichi chikamu ndechevashandi vokune imwe nyika. Kune avo vari kutsvaga ruzivo pamusoro pekugadzirisa visa. Tsvaga nekambani yedu mamwe mashoko. Kunyanya nezvekushanda kune imwe nyika. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, boka redu riri kunyora zvakakwana mashoko. Senyaya, chokwadi, kupinda kuMiddle East. Munyika dzakawanda, chirongwa chevisa chinodiwa. Kubva kufamba kana kunyange vhiza yekushanda. Usati wafamba, zvinhu zvose zvinofungidzirwa, ndezvaunofanirwa. Kazhinji kutaura, pasinei nokuti unoenda kupi. Iwe unofanirwa kuzvigadzirira. Ipasipoti inofanirwa kusvika. Uyewo netikiti.
Saka, nokuda kwechinhu chimwe chete, kugadzirira kwekufamba ndicho chinhu chikuru. Semuenzaniso, zvinotsvaga mumatambudziko akawanda zvinoda kuva mapepa ekushanda. Saka, nemashoko aya. Vatsva vatsva vanotsvaka basa. Kutarisa mberi kutungamirirwa. Basa redu nderokukubatsira kusvika kune unyanzvi hwebasa.
Kutaura kuti boka redu rinonyora zvitsva zvebhurogi. Anenge vhiki imwe neimwe. Somuenzaniso, chii chaunoda kuwana mvumo yekushanda. Nokuti kutsvaka basa ndechimwe chinhu. Uye kugamuchira tsamba yebasa ndeimwe nyaya. Ichi ndicho chikonzero Dubai City Company inobatsira kutsvaga nekushanda kwemvumo.
Titi yedu iri kunyora pamusoro peMiddle East. Uyewo nenyika dzeGCC. Nezvakanaka, uchawana mamwe mashoko anofadza. Nekushanda kunze kune dzimwe nyika pamwe chete. Vashandi vemabasa akanaka. Tariro yekukuona iwe munguva pfupi iri muDaily City.
Nzira yeVisa uye nhungamiro yezvinyorwa zvekutsvaga pasi rose. Ichi chikamu ndechevashandi vokune imwe nyika. Kune avo vari kutsvaga ruzivo pamusoro pehutano hwevisa
WhatsApp Groups muGulf
WhatsApp Groups muGCC. Uyezve, ngatikurukurei kuMiddle East. Kambani yedu iri kubatsira vanhu kuti vave vanofara vachitsvaka basa kuMiddle East. Titi redu rinotarisira mabasa akawanda emapoka. Sezvakangoitika, ivo vose havana mari. Uye anenge chero munhu upi noupi anogona kubatana. Inotsanangura pakutanga pakutanga kutanga maboka. Saka boka redu rine izvi mupfungwa rakagadzira mapoka akawanda ekugadzirira. Muzvokwadi, takatanga mu Dubai. Ipapo vatariri vedu vakatamira kuMiddle East yose.
Uye mushure mechinguva, kambani yedu yeguta reA Dubai inowedzera mabasa. Takatanga kuzarura kune mamwe mapoka akawanda. Senyaya, vanhu chaivo vanogona kujoina Gulf Groups. Uyewo neKwait, Bahrain neQatar. Vashandi vane ruzivo rwakawanda ruzivo. Nezvozvi mupfungwa, ivo vari kutumira izvo paChechi dzedu dzeAssApp dzinosangana. Somuenzaniso, vatori vanobatana nemapoka edu. Zvadaro kutumira mabasa kunopa. Uye mumagumo vari kutsvaga basa vachitsvaga basa ku Dubai. Izvo Zvine Zvishoma Here? Ehe iri. Zvose zvaunoda kuti uite ndekuve neAsapp App. Uye kubatana nemapoka. Nhanho yakanaka yevashandi vemabasa. Uye zvakawanda pamusoro pehurukuro iyi unogona kuwana pasi apa.
WhatsApp Groups muCCC uye kuMiddle East nokuda kweMabasa. Tsvaga kuti ungawana sei basa kuti uite zvinyorwa zvemafambisi ekufambisa ku Dubai uye Abu Dhabi
Basa mune Middle East ..
Basa muMiddle East rinogona kunyatsowanikwa nekambani yedu. Tiri pano kuti tibatsire kutsvaga kubva kumativi ese.
Mabasa neAetna International - Global Healthcare mupi wezvehutano Aetna International achangobva kuongorora 2,000 kubuda kwevashandi pasi rese, kuti vaone kuti ndezvipi zvikamu zvekutamiswa kwenyika kunokanganisa hutano hwavo uye kugara kwavo kwakanyanya. Pakati pemibvunzo, expats vakabvunzwa kuti vataure kuti ndedzipi nzvimbo dzekugara muAFA dzavakawana zvakanyanya kuoma. Ongororo yacho yakaburitsa kuti: 91% yezvekubuda muAFA yakawana 'kufambidzana' chinhu chinonyanya kunetsa chekuenda kunze kwenyika. Izvi zvakakwirira kupfuura svikiro yepasi rose (76%) 90% ye expats muUAE yakawana kuti 'kufambidzana' kune chekuita nehupenyu hwavo. Izvi zvakapetwa kaviri pasirese yepasi rose (45%) 91% ye expats muUAE yakawana kuti 'kuwana shamwari nyowani' kune chekuita nehupenyu hwavo hwakanaka. Izvi zvinodarika zvakapetwa kaviri pasirese wepakati (43%) 40% ye expats mu UAE akanzwa kuti 'kuwana nharaunda' kune chekuita noutano hwavo. Izvi zvakakwira kupfuura avhareji yepasi rose (24%) [...]
Rwendo rwebasa rinovhima
Rwendo rwekuvhima kwebasa - Tarisa pasi pazasi pechikamu chekutanga! Zvino kudzoka kuchinangwa chikuru chekushanya kwangu, iko basa rekuvhima. Mumavhiki maviri ndakazoona kuti mamiriro ezvinhu haana sekuvimbisa, ndinofanira kutsvaga basa ndichigara ipapo. Zvaive zvekundivhundutsa asi chokwadi chaivepo chaigona kuramba. Mushure memavhiki maviri ekucherekedza, ndakave nechokwadi chekuwana chimwe chinhu munguva pfupi uye ini ndaida kutaura zvakanaka kune anga andibata nekukurumidza sezvinobvira. Ini ndaisada kuva mutoro pavari kunyangwe zvavo vasina kumboita kuti ndinzwe sekunge, ndakanga ndisina kugadzikana. Vakatenderedza CV yangu munharaunda yavo yemagariro uye nehunyanzvi, ivo vakarongedza mamwe mapepanhau kubva kwandaifanira kusefa mabasa akakodzera kwandiri ayo anoenderana neye mbiri yangu. Kwaingova kutanga. Rwendo rwekuvhima basa raida maitiro a [...]
Tikugashirei kune Vanyanzvi vekutsanangudza Vanogamuchirwa kune Sohaib Hasan's LinkedIn Kuchengeta Kwepuro. Vanyoreri uye vateveri kubva kune edu enhau vezvenhau vanozove neazvino maficha ezuva nezuva eShahaib mikana yeJobe Mukana, Matipi Ekutarisira, Kukurudzira uye zvimwe zvakawanda. Pamwe kuva expat chimwe chidzidzo refu chatinofanira kuenderera mberi ... Sohaib Hasan Sohaib Hasan munhu anotungamirwa uye ane ruzivo rwenyika ano ruzivo rwakanaka kuita zvinhu uye kushanda nesimba. Chake chinoshamisa chiitiko seHR Consultant (Germany, UK, China, Pakistan uye UAE) inobatsira yatove zviuru zviuru zvevatsvaki vebasa pasi rese. Sohaib inoshanda nechiratidzo chinoshamisa kubatsira vamwe. Uye zvechokwadi ari pedyo negumi remubudiriro muDubai. Zvakare, kuisa simba mukushanda kweHR, kubva kuumbwa kwebumbiro nekuitwa. Zvakare pamwe neMafungiro uye Kubudirira kweH HR based software mapurogiramu. Kusvika pakuita iyo yakakosha HR mabasa eRubatsiro, Kusarudzwa, Kudzidziswa, Kusimudzira uye [...]
Chii chaunofanirwa kunge uchiita iwe uchitsvaga basa kuDubai? Zvakanaka, iwe uchitsvaga basa kuDubai. Pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuziva usati waisa chikumbiro. Uye zvechokwadi, isu tose tinoziva hachisi chinhu chakareruka kuita. Iyo poindi yakaoma ndeyekuti uchengetedze pfungwa dzako dzakananga kune iyo nhanho. Usambofa wakadzika pasi uye chengeta pfungwa dzako dzakagadzirirwa kubudirira. Iva akatendeseka zviri nyore kunyora. Zvakanyanya kuoma kubata. Paunenge uchitsvaga basa kuMiddle East, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kudzivisa. Kunyanya kana isu tiri kutaura nezve kutsvaga basa muDubai uye Abu Dhabi. Iko kugona kweKufunga Kukurira kugona kuona! Akanyanya Kuita Jobho Tsvaga Kukanganisa Kudzivirira 1. Kune Ruzivo Rwakawanda MuMuchina Wako Zvakaitika zvebasa kwechokwadi hazvishande pane imwe vita vita kunze kwekunge iwe wanyora chaizvo [...]